Famaritana ny vokatra - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Anaran'ny vokatra: saron-tava fiarovana tsy Kn95
Modely: AKF 2002
GB2626-2006 Executive Executive: GB 2626-2006;
1. Ny tsy fanarahana ny torolàlana sy ny famerana ny boky torolàlana dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahaizan'ny fiarovana ny vokatra, izay mety hiteraka aretina, ratra na fahafatesana.
2. Tena zava-dehibe ny fisafidianana tsara ny vokatra fiarovana ny taovam-pisefoana. Alohan'ny hampiasana dia ampiofano ny mpampiasa hampiasa ny fiarovana ny ainy vokatra tsara araka ny fenitra azo antoka momba ny fiarovana sy ny fahasalamana.
3. Ity vokatra ity dia tsy manome oxygen. Ampiasao azafady amin'ny tontolo misy oksizena ampy sy rivotra madio.
4. Raha misy ireto fepetra manaraka ireto dia atakalo azafady ny sarontava ara-potoana:
A. Dyspnea ateraky ny sakantsakana tafahoatra vokatry ny fampiasana diso tafahoatra.
B. Ny maska ​​dia simba
5. Raha sendra mikorontan-tsaina, sosotra na tsy mahazo aina hafa, dia avelao eo noho eo ilay faritra voaloto.
Fepetra amin'ny fampiasana:
1. Raha sendra soritr'aretina dia aza mampiasa ity vokatra ity hidiranao na hijanonany Amin'ny faritra voaloto
A. Ny atin'ny oxygen dia ambany noho ny 19,5%;
B. Raha nisy fofona na efa nanandrana ny loto;
C. Tontolo iainana etona na etona manimba;
D. loto tsy fantatra na ny fifantohany, na tontolo iainana mampidi-doza amin'ny fiainana na fahasalamana
E. Ho an'ny famaohana fasika, fandokoana ary asbestos;
F. Tontolo iainana mipoaka
2. Aza mamerina misaron-tava raha tsy mahazo alalana
3. Be loatra ny volo toy ny volombava ny fiarovana vokatry ny izany vokatra !
4. Alohan'ny hampiasana azy tsirairay dia ilaina ny manamarina ny sarontava mba hahazoana antoka fa tsy misy lavaka na fahasimbana amin'ny vatan'ny sarontava. Ny fanitarana ny lavaka ateraky ny fandraofana ireo fitaovana sivana dia heverina ho toy ny fahasimbana.
5. Ity vokatra ity dia afaka manivana ireo loto manokana, saingy tsy afaka manafoana ny loza ateraky ny rivotra. Ny fampiasana diso amin'ny fomba ratsy dia mety miteraka aretina sy / na fahafatesana.
6. Ity vokatra ity dia voamariky ny "NR" ary tsy azo ampiasaina mihoatra ny indray mandeha.
7. Ity vokatra ity dia tsy mety amin'ny mpampiasa marary sofina.
1. Saron-tava, rakotra orona miolakolaka.
2. Amboary ny saron-tava amin'ny orona sy vava, ary sintomy any aoriana ny sofina.
3. Ampiasao ny tanana roa, afatory ny clip orona ary sintomy ny fehikibo mba hahazoana antoka ny famehezana ny sarontava.
4. Fanaraha-maso famehezana
A. Tantano ny fitsapana mety nefa tsy misy ny seranan-tsofina, Sarony amin'ny tanana roa ilay sarontava, ary misoka mafy.
B. Raha tsapa ny fikorianan'ny rivotra manodidina ny orona, ahodino / apetaho ny tadin'ny orona. C, Raha tsapa eo amin'ny sisin'ny sarontava ny fikorianan'ny rivotra, amboary ny sarontava / fehikibo
5. Raha sarotra ny miaina na simba ny sarontava na simba, atakalo avy hatrany.
6. Raha tsy tratra ny famehezana ny tarehy dia alao ny sarontava
7. Dingana iray lehibe tokony hampiasaina tsara ny respirator hitandrina tsara ireo torolalana ireo.
Fomba fitehirizana: ny hafanana fitehirizana dia 20 ℃ ka hatramin'ny 40 positive tsara, ny hamandoan'ny rivotra anaty trano dia latsaky ny 80%, ny hamandoana, ny porofon'ny orana, ny rivotra ary ny porofon'ny masoandro.
Mpanamboatra: Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Adiresy: Valan-javaboary ara-tsiansa sy haitao ary teknolojia E6, Distrikan'i Xixiu, Anshun, Guizhou.